Rasolomampionona Hasimpirenena : “Be mpangataka indrindra ny fandovana tany” | NewsMada
Hanamora sy hanafaingana ny famindran-tompo ny tany nolovaina ny tsy fandoavana saram-pikarakarana. Hahazo titra koa ireo olona manajary ny tany nisoratra amin’ny voanjo.
Nanamafy ny kabarin’ny filoham-pirenena, ny zoma lasa teo, ny tale jeneralin’ny Fananan-tany, Rasolomampionona Hasimpirenena. Toy ny fikarakarana maimaimpoana ny famindrana tompo ny tany amin’ny mpandova ato anatin’ny enim-bolana (janoary- jona). Nambarany fa tsy andoavam-bola ny fakana ny taratasy tombam-pananana alaina any amin’ny sampandraharahan’ny hetra. Tsy akana vola koa ny fikarakarana ny antontan-taratasy ao amin’ny sampandraharahan’ny fananan-tany. Manodidina ny 2% amin’ny tombam-bidin’ny tany ity farany, raha ny lalàna.
Lafo ny sarany
“Tsy voakasik’ity kosa ny fakana ny taratasy fandovana sy ny kopia fahafatesana alaina any amin’ny kaominina. Satria, misy ilana an’ireny taratasy ireny amin’ny raharaha hafa fa tsy voatery ho fananan-tany ihany”, hoy ihany izy.
Notsorin’ny DG Rasolomampionona Hasimpirenena fa anisan’ny raharaha be mpangataka indrindra ao amin’ny sampana iadidiany ny famindrana ny tany lova. Sakana ho an’ireo manan-draharaha anefa ny halafosan’ny fikarakarana ka maro ny tsy mahatontosa azy, ka izay ny anton’ity fepetra noraisin’ny fanjakana ity.
Atao titra ny taratasy
Fepetra faharoa koa ny tany midadasika, misoratra amin’ny voanjo, na vahiny fony fanjanahantany, nefa tsy ampiasainy ary efa misy olona maromaro manajary. Averina hisoratra amin’ny fanjakana ireny tany ireny, ary afindra tompo amin’ireo manamaintimolaly azy avy eo.
Nilaza izy fa tena ahitana ny tany misoratra amin’ny vahiny any Itasy, Ankadinondry Sakay, Alaotra, any amin’ny faritra Sofia, sns. Vita titra avokoa izy ireny ka tsy maintsy titra ihany koa ny hanoratana azy amin’ireo manamaintimolaly.
Une réponse à "Rasolomampionona Hasimpirenena : “Be mpangataka indrindra ny fandovana tany”"
Rasolonjatovo Judith 25/02/2016 à 09:14
Sampandraharahan’ny hetra aiza no aleha raha any Ambohimalaza ilay tany lova